Umhle "Maison Vigneronne"
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaud
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMaud iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifakwe kwi-hamlet ethandekayo nenoxolo, le ndlu yeyona ndawo ifanelekileyo yokurenta usapho okanye iqela labahlobo. Igumbi lokuhlala, ithala kunye negadi ejonge i-vallée du Lembron. 10 mn drive ukusuka kwiivenkile eziluncedo, 40 mn ukusuka Clermont Fd.
Uya kuthakazelelwa ngumbono phezu kwentlambo yonke onokuyonwabela ukusuka kwi-terrace okanye kwigumbi lokuhlala elikhulu, kunye nendawo kunye nentuthuzelo yamagumbi. ILa Brugère sisiqalo esigqibeleleyo sokujonga ummandla omhle weAuvergne.
Ngeeholide zakho okanye ngeempelaveki zakho, iAuvergne yindalo ngaphandle kwemida. Umcimbi wakho oyintloko uya kuba kukhetha phakathi koluhlu olupheleleyo lwemidlalo kunye nemisebenzi yenkcubeko: ukuhamba, ukuhlamba, ukunyuka, ukukhwela i-rafting, i-hand-gliding, i-paragliding kunye ne-mountain biking yimizekelo embalwa. Ikwayindawo egqibeleleyo yokuphumla okanye ukonwabela i-gastronomy yengingqi emangalisayo. Ndabonisa kwiNcwadi yesiKhokelo ukhetho lweendawo zokutyela, iivenkile zamasi kunye nezinye iimfihlo ezigcinwe kakuhle. Isikhokelo sikwabandakanya zonke iireferensi oya kuzifuna ukulungiselela uhambo lokuloba, ukukhwela ihashe, iseshoni yemidlalo yamanzi, ukutyibiliza okanye ukubhabha kwi-glider okanye iparaglider. Ukuba uziva ngathi luhambo lwenkcubeko kunye nembali, olu khetho lulandelayo lweelali ezintle zengingqi zihlala zilungiselela iminyhadala yasehlotyeni, iimarike zentakumba kunye neminye iminyhadala: Brioude, Blesle, Montpeyroux, Usson, Saint Saturnin, Tournemire, Salers okanye Besse. Jonga nje kwi-intanethi kwiminyhadala elandelayo, edla ngokupapashwa kwiwebhusayithi yoomasipala abachaphazelekayo.
My name is Maud, I grew up next door. I am a nature-lover who enjoys good food, good times and crazy sports. My family and I would love to share with you our passion for this magni…
Usapho lwam luya kuba lapho ukuze lwamkele kwaye lukukhenkethe endlwini, kunye neengcebiso kunye neengcebiso malunga neendawo onokuthi uzindwendwele, iivenkile ezikufutshane kunye neendawo zokutyela ezingakuphoswa. Lonke olu lwazi lukwafakwe kwimephu yeSikhokelo.
Usapho lwam luya kuba lapho ukuze lwamkele kwaye lukukhenkethe endlwini, kunye neengcebiso kunye neengcebiso malunga neendawo onokuthi uzindwendwele, iivenkile ezikufutshane kunye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Germain-Lembron